“Raha tsy i Jehovah no miambina ny tanàna, dia very maina ny fiaretan-torin’ny mpiambina.”—SAL. 127:1b.
Nahoana isika no mila miaro ny fontsika?
Nahoana isika no tokony hiezaka hifandray akaiky amin’Andriamanitra foana?
Ahoana no tokony hifampiresahan’ny mpivady raha te hanamafy ny fatoram-panambadiany izy ireo?
1, 2. a) Nahoana no namoy lova sarobidy ny Israelita 24 000? b) Nahoana no fampitandremana ho antsika io zava-nitranga io?
LEHILAHY an’aliny no “nanao firaisana tamin’ny zanakavavin’i Moaba”, taloha kelin’ny nidiran’ny firenen’Israely tao amin’ny Tany Nampanantenaina. Olona 24 000 àry no naringan’i Jehovah. Efa kely sisa dia azon’izy ireo ilay lova sarobidy nandrasany hatry ny ela. Nafoiny anefa izany satria tsy nahatohitra fakam-panahy izy ireo.—Nom. 25:1-5, 9.
2 Nosoratana ao amin’ny Baiboly izany mba “ho fampitandremana ho antsika, dia isika izay tratran’ny faran’ireo rafitra nisy teto amin’ity tontolo ity.” (1 Kor. 10:6-11) Efa akaiky koa izao ny tontolo vaovao, satria isika efa miaina amin’ny ampahany farany amin’ny “andro farany.” (2 Tim. 3:1; 2 Pet. 3:13) Mampalahelo anefa fa misy mpanompon’i Jehovah tsy miambina tsara ka lasa maloto fitondran-tena ary mijinja vokany mangidy. Mety hamoy ny fiainana mandrakizay izy ireny.
3. Nahoana ny mpivady no mila ny tari-dalan’i Jehovah sy ny fiarovany? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
3 Maro be ny olona maloto fitondran-tena ankehitriny. Mila ny tari-dalan’i Jehovah sy ny fiarovany àry ny mpivady mba tsy ho very maina ny ezaka ataony hiarovana ny tokantranony. (Vakio ny Salamo 127:1.) Ho hitantsika ato fa afaka manamafy ny fatoram-panambadiany ny mpivady rehefa miaro ny fony, mifandray akaiky amin’i Jehovah, mitafy ny toetra vaovao, mifampiresaka tsara foana, ary manao ny adidy amim-bady.
4. Inona no nahatonga ny Kristianina sasany haloto fitondran-tena?
4 Inona no mety hahatonga ny Kristianina haloto fitondran-tena? Manomboka eo amin’ny maso ilay izy matetika. Hoy i Jesosy: “Izay rehetra tsy mitsahatra mijery vehivavy ka maniry hanao firaisana aminy, dia efa nanitsakitsa-bady tao am-pony sahady.” (Mat. 5:27, 28; 2 Pet. 2:14, f.a.p.) Kristianina maro no lasa tsy tapa-kevitra tsara ny hadio fitondran-tena intsony ka nijangajanga. Nahoana? Niditra tao amin’ny Internet izy ireo ka nijery sary vetaveta, na namaky boky manaitra ny faniriana hanao firaisana, na nijery zavatra mamoafady. Nisy indray nijery filma na tantara an-tsehatra na fandaharana amin’ny tele, izay mampiharihary fanaovana firaisana. Nisy koa nankany amin’ny boîte de nuit, na nijery fampisehoana misy olona manala akanjo, na nankany amin’ny mpanotra manaitaitra fanirian-dratsy.
5. Nahoana isika no mila miaro ny fontsika?
5 Misy koa resin’ny fakam-panahy satria nitady fiahiana tamin’ny olona tsy vadiny. Tsy mahafehy tena ny olona eto amin’ity tontolo ity sady mifaly amin’ny fitondran-tena maloto. Ny fo koa mamitaka sy sarotra fehezina. Mora miraiki-po amin’ny olona tsy vadiny àry ny olona. (Vakio ny Jeremia 17:9, 10.) Hoy i Jesosy: ‘Avy ao am-po no ivoahan’ny eritreri-dratsy, ny vonoan’olona, ny fanitsakitsaham-bady, ary ny fijangajangana.’—Mat. 15:19.
6, 7. a) Mamitaka ny fo ka mety hitarika ny olona hanao inona? b) Inona no hanampy antsika tsy haloto fitondran-tena?
6 Mety hanomboka hiresaka zavatra tsy tokony horesahina afa-tsy amin’ny vady ny olona roa efa mifanintona, raha misy fanirian-dratsy ao am-pony. Lasa mitady hirika hiarahana foana izy ireo ka mihaona matetika, toy ny hoe noho ny kisendrasendra. Mihamifandray am-po izy ireo ka tsy tapa-kevitra tsara ny hadio fitondran-tena intsony. Fantany fa tsy mety ny ataony, nefa arakaraka ny hifandraisan’izy ireo no mahasarotra ny manapaka an’ilay fiarahana.—Ohab. 7:21, 22.
7 Mety hanomboka amin’ny fanirian-dratsy sy resaka tsotra ilay izy. Hadino tanteraka anefa ny fitsipik’i Jehovah rehefa mitatra izany ka mifandray ny tanan’izy ireo, mifanoroka izy, mifanafosafo, mifampikasikasika mba hanairana ny faniriana hanao firaisana, na mifaneho fitiavana amin’ny fomba hafa. Ny mpivady ihany anefa no tokony hanao an’ireo. “Voasariky ny fanirian’ny tenany ihany” izy ireo amin’ny farany, “ka voafandrik’izany.” Voakolokolo ilay faniriana ka “miteraka fahotana”, izany hoe fijangajangana. (Jak. 1:14, 15) Loza tokoa izany! Azo nosorohina anefa izany rehetra izany. Tokony ho namela an’i Jehovah hanampy azy hanaja kokoa ny fahamasinan’ny fanambadiana izy ireo. Ahoana no anaovana izany?
MIEZAHA HIFANDRAY AKAIKY AMIN’ANDRIAMANITRA FOANA
8. Nahoana no miaro antsika tsy haloto fitondran-tena ny mifandray amin’i Jehovah?
8 Vakio ny Salamo 97:10. Tena miaro antsika tsy haloto fitondran-tena ny mifandray amin’i Jehovah. Vao mainka isika ho tapa-kevitra hanalavitra “ny fijangajangana sy izay rehetra mety ho fahalotoana”, rehefa mahalala ny toetra tsaran’i Jehovah sy miezaka ‘manahaka azy amin’ny maha zanaka malala ary mandeha mandrakariva amin’ny fitiavana.’ (Efes. 5:1-4) Miezaka mafy hiaro ny fanambadiany mba ho mendri-kaja sy tsy ho voaloto ny mpivady, satria fantany fa “homelohin’Andriamanitra ny mpijangajanga sy ny mpanitsakitsa-bady.”—Heb. 13:4.
9. a) Nahoana i Josefa no nahatohitra fakam-panahy? b) Inona no ianarantsika avy amin’i Josefa?
9 Nisy mpanompon’i Jehovah tsy mivadika lasa tsy tapa-kevitra tsara ny hadio fitondran-tena intsony, satria nifandray tamin’ny mpiara-miasa tsy Vavolombelona, taorian’ny ora fiasana. Mety hisy ny fakam-panahy na dia mandritra ny ora fiasana aza. Tany am-piasana, ohatra, ilay tovolahy tsara tarehy atao hoe Josefa no nahalala fa tia azy ny vadin’ny mpampiasa azy. Naka fanahy azy isan’andro ilay vehivavy. “Nisambotra azy tamin’ny akanjony” izy tamin’ny farany sady niteny hoe: “Avia hanao firaisana amiko!” Afaka nandositra anefa i Josefa. Inona no nanampy azy hadio fitondran-tena foana? Tapa-kevitra ny hiaro ny fifandraisany tamin’i Jehovah izy. Namoy ny asany izy vokatr’izany ary nogadraina tsy ara-drariny, nefa nitahy azy i Jehovah. (Gen. 39:1-12; 41:38-43) Mila manalavitra an’izay rehetra mety hahatonga fakam-panahy àry ny Kristianina, na any am-piasana na any an-toeran-kafa.
TAFIO NY TOETRA VAOVAO
10. Miaro antsika tsy hanao inona ny toetra vaovao?
10 “Noforonina araka ny sitrapon’Andriamanitra, amin’ny tena fahitsiana sy tsy fivadihana” ny toetra vaovao ka tena ilain’ny mpivady, satria miaro azy ireo tsy hijangajanga. (Efes. 4:24) ‘Mamono’ ny fironan-dratsy ao amin’ny rantsambatany ireo mitafy ny toetra vaovao. Anisan’izany ny “fijangajangana, fahalotoana, filan’ny nofo, fanirian-dratsy, ary ny fitsiriritana.” (Vakio ny Kolosianina 3:5, 6.) Ilay teny hoe ‘mamono’ dia midika fa mila mandray fepetra hentitra isika mba hiadiana amin’ny fanirian-dratsy. Halavirintsika izay rehetra mety hahatonga antsika haniry hanao firaisana amin’ny olona tsy vadintsika. (Joba 31:1) Hianatra ‘hankahala ny ratsy’ sy ‘hifikitra amin’ny tsara’ isika, rehefa mampifanaraka ny fiainantsika amin’ny sitrapon’Andriamanitra.—Rom. 12:2, 9.
11. Nahoana no mihamafy ny fatoram-panambadiana rehefa mitafy ny toetra vaovao ny mpivady?
11 Manahaka an’i Jehovah isika rehefa mitafy ny toetra vaovao. (Kol. 3:10) Hotahin’i Jehovah ny mpivady rehefa manamafy ny fatoram-panambadiany ka miezaka haneho ‘fitiavana lalina, fangoraham-po, hatsaram-panahy, fanetren-tena, fahalemem-panahy, ary fahari-po.’ (Kol. 3:12) Mifanara-tsaina kokoa izy ireo rehefa mamela ‘ny fiadanan’i Kristy hanjaka ao am-pony.’ (Kol. 3:15) Handray soa tokoa ny mpivady rehefa ‘mifaneho firaiketam-po lalina.’ Faly izy ireo satria samy miezaka ny ho ‘loha laharana amin’ny fifanomezam-boninahitra.’—Rom. 12:10.
12. Inona no toetra hitanao hoe mahasambatra ny tokantrano?
12 Nanontaniana i Sid hoe inona no mahasambatra ny tokantranony. Hoy izy: “Fitiavana no tena niezahanay nananana foana. Hitanay koa hoe tena ilaina ny fahalemem-panahy.” Manaiky an’izany i Sonja vadiny ary hoy izy: “Tena ilaina ny hatsaram-panahy. Miezaka manetry tena koa izahay, na tsy mora foana aza izany.”
MIFAMPIRESAHA TSARA FOANA
13. Inona no ilaina mba hahamafy ny fatoram-panambadiana, ary nahoana?
13 Tena ho mafy orina koa ny tokantrano, raha tsara fanahy ny mpivady rehefa mifampiresaka. Mampalahelo raha ny olon-tsy fantatra na ny biby namana an-trano indray no iresahana amim-panajana kokoa noho ny vady. Hihena tsikelikely ny fifankatiavana raha avela hisy ‘lolompo, fahatezerana, fahavinirana, filelalelana, ary fanevatevana’ ao an-tokantrano. (Efes. 4:31) Manimba tokantrano ny manesoeso na manakiana lava. Manamafy ny fatoram-panambadiana kosa ny teny feno hatsaram-panahy sy fitiavana ary fangorahana.—Efes. 4:32.
14. Inona no tokony hohalavirin’ny mpivady?
14 Milaza ny Baiboly fa “misy fotoana anginana.” (Mpito. 3:7) Tsy midika anefa izany hoe mety ny tsy miteny tsy mivolana. Misakana ny fifampiresahana izany, nefa tena ilain’ny mpivady ny mifampiresaka. Nilaza ny vehivavy iray any Alemaina fa “mety hampalahelo ny vadinao ianao raha tsy miresaka.” Hoy anefa izy: “Tsy mora foana ny ho tony rehefa misy olana. Tsy mety anefa raha avela hipoaka ny hatezerana. Hahateny na hanao zavatra mampalahelo ny vadinao ianao raha manao an’izany, ary vao mainka hitatra ny olana.” Tsy mandamina olana ny mifampivazavaza na tsy mifampiteny. Hihamafy kosa ny fatoram-panambadiana raha alamina haingana ny tsy fifanarahana ary tsy avela hitatra ho lasa ady.
15. Nahoana no manamafy ny fatoram-panambadiana ny fifampiresahana tsara?
15 Mihamafy ny fatoram-panambadiana rehefa manokana fotoana hifamborahana ny any am-pony sy any an-tsainy ny mpivady. Marina fa zava-dehibe ny zavatra lazaina, nefa zava-dehibe koa ny fomba ilazana azy. Miezaha àry ho tsara fanahy na dia misy olana aza, ary ataovy tsapa amin’ny feonao sy ny teninao izany. Ho mora kokoa amin’ny vadinao amin’izay ny hihaino anao. (Vakio ny Kolosianina 4:6.) Mihamafy ny fatoram-panambadiana raha mifampiresaka tsara ny mpivady, ka samy milaza “teny tsara ho fampaherezana, rehefa ilaina izany, mba hahasoa” ny andaniny sy ankilany.—Efes. 4:29.
Manamafy ny fatoram-panambadiany ny mpivady rehefa mifampiresaka tsara (Fehintsoratra 15)
ATAOVY NY ADIDY AMIM-BADY
16, 17. Nahoana no tokony hihevitra ny fihetseham-pon’ny vadiny sy izay ilainy eo amin’ny resaka firaisana ny mpivady?
16 Afaka manamafy ny fatoram-panambadiany koa ny mpivady, raha mitady izay hahasoa ny vadiny alohan’izay hahasoa ny tenany. (Fil. 2:3, 4) Tokony hihevitra ny fihetseham-pon’ny vadiny sy izay ilainy eo amin’ny resaka firaisana ny lehilahy sy vehivavy manambady.—Vakio ny 1 Korintianina 7:3, 4.
17 Mampalahelo fa misy olona tsy tia maneho fitiavana ny vadiny na tsy tia manao firaisana aminy. Misy koa lehilahy mihevitra fa tsy tena lehilahy izay maneho fitiavana ny vadiny. Hoy anefa ny Baiboly: ‘Ianareo lehilahy, miezaha hahatakatra ny fihetseham-pon’ny vadinareo.’ (1 Pet. 3:7, Fandikan-tenin’i Phillips, anglisy) Tokony ho takatry ny lehilahy fa tsy hoe manao firaisana fotsiny ny hoe manao ny adidy amim-bady. Azo inoana fa hahafa-po kokoa an’ilay vehivavy ny firaisana, raha tia azy sy tsara fanahy aminy ny vadiny amin’ny fotoana rehetra, fa tsy hoe rehefa manao firaisana ihany. Raha samy maneho fitiavana ny mpivady, dia ho afaka hanome fahafaham-po ny andaniny ny ankilany, na eo amin’ny resaka firaisana na eo amin’ny ara-pihetseham-po.
18. Inona no azon’ny mpivady atao mba hanamafisana ny fatoram-panambadiany?
18 Marina fa tsy azo alan-tsiny ny fanitsakitsaham-bady. Mety hitady olon-kafa hitia azy sy hanao firaisana aminy anefa ny olona iray, raha tsy maneho fitiavana azy ny vadiny. (Ohab. 5:18; Mpito. 9:9) Mampirisika ny mpivady àry ny Baiboly hoe: “Aoka tsy hisy aminareo tsy hanaiky hanao ny adidy amim-bady, raha tsy efa ifanarahanareo angaha hoe mandritra ny fotoana iray.” Nahoana? Hoy ihany ny Baiboly: “Sao haka fanahy anareo foana i Satana noho ny tsy fahaizanareo mifehy tena.” (1 Kor. 7:5) Loza tokoa raha avelan’ny mpivady hanararaotra ‘ny tsy fahaizany mifehy tena’ i Satana, ka ho resin’ny fakam-panahy hanitsakitsa-bady ny iray aminy. Aza mitady ‘izay hahasoa ny tenanao’ àry, fa tadiavo “izay hahasoa” ny vadinao. Tsy hihevitra ny adidy amim-bady ho toy ny adidy fotsiny ianao amin’izay, fa hihevitra azy io ho fomba anehoana fitiavana koa. Hanamafy ny fatoram-panambadianareo ny firaisana amin’izay.—1 Kor. 10:24.
AROVY FOANA NY FANAMBADIANAO
19. Tokony ho tapa-kevitra ny hanao inona isika, ary nahoana?
19 Kely sisa isika dia hiaina ao amin’ny tontolo vaovao. Ho loza àry raha hanaiky ho resin’ny fanirian-dratsy isika, toa an’ireo Israelita 24 000 teo amin’ny Lemak’i Moaba. Hoy ny Baiboly rehefa avy niresaka an’iny zava-nitranga iny: “Izay mihevi-tena ho efa mijoro dia aoka izy hitandrina sao ho lavo.” (1 Kor. 10:12) Tena mila manamafy ny fatoram-panambadiany àry ny mpivady, ka tsy hivadika amin’ilay Rainy any an-danitra sy amin’ny vadiny. (Mat. 19:5, 6) Vao mainka isika izao tokony ‘hanao izay rehetra azo atao mba ho hitany ho tsy misy pentina sy tsy misy tsiny ary ao amin’ny fihavanana, amin’ny farany.’—2 Pet. 3:13, 14.
Hizara Hizara Avelao i Jehovah Hanamafy Orina sy Hiaro ny Fanambadianao